Amantaa - BBC News Afaan Oromoo
Dhiibbaa eenyummaafi afaanii mana amantichaatiin irra gaheef ummanni Oromoo dhiifama gaafatamuu qaba jedhan Luba Balaay Mokonnin.
Gareeleen Liibiyaa ayyaana Iid al-Adhaaf jecha dhukaasa dhaabuuf wal ta'an
Ayyaana kana sababeeffachuun hanga Wiixata galgalaatti dhukaasa akka dhaaban hoogganaan garee hidhattootaa Janaralaa Kaliif Haftaar dubbatan.
Bulchaan magaalaa Finfinnee masjiida 'dogongoraan' guyyaa kaleessaa jigeefi komii ka'eef dhiifama gaafatan.
Naajeeriyaatti paastarii gudeeduun yakkamaa ta'e bakka isaatti deebisuun mormii kaase
Niwuziilaand keessatti namoonni meeshaa waraanaa harkaa qaban deebisanii galii gochaa jiru. Kunis erga haleellaan Bitootessa darbe Masjiida magaalaa Kiraayisticharch irratti raawwatamee as akkaataa waliigaltee irra ga'ameen kan raawwatamaa jiruudha.
''Hawaasni aadaadhaan beekama. Aadaanimmoo afaaniin ibsama, argaa dhageettiidhaan tikfamee dhalootatti darba. Namni maqaa hin qabne biyya hin qabu, biyyi maqaa hin qabnes abbaa hin qabu,'' jedhu hayyoonni seenaa Oromoo qoratan.
Amantii Pirootestaantii: 'Kaaraatee kanan baradhe seexana baasuuf jecha miti'
Iyyuu Cufaa tajaajilaa hordoftoota amantii warraa Wangeelaa ykn Pirotestaantii biratti raajii fi duuka bu'ummaan Itoophiyaa keessatti ka'an jedhame keessaa tokko.
Amantaa Kiristaanummaa waliin hidhata jabaa akka qabdu kan himamuuf magaalaa Aksuum keessa Masjiidni tokkollee hin jiru. Gaaffiin masjiida ijaarrachuu Musliimota magaalattii yeroo dheeraaf deebii osoo hin argatiin tureera.
Mootummaan waan duraan harka isaatiin balleesse amma sirreessaa jira malee amantaa keenya keessa seenee murteessaa hin jiru jedhan Gorsaan Majilisa Ce'umsaa Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Ji'a ramadaanaa keessa tamiriin maaliif filatamaa ta'e?
Manzuumaa ykn bifa faaruutiin Islaamummaa barsiisuudhaan kan beekaman Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa loltuu ABO akka turan quba qabduu? Quuqama sabummaa fi amantii abbaa kiyyarraan dhaale jedhu.
Hawaasni Musliimaa Itoophiyaa yaa'ii waliigalaa geggeesseen caasaalee mana maree maree walii galaa dhimmoota Islaamummaa 'Majiliisa' jedhamuun waamamurratti jijjiirama hooggansaa fi hojimaataa geggeesseera.
Zaakir Naa'ik biyya garaagaraatti kan dhorkame yoo tahu, doolaara miiliyoona 28 seeraan ala dhuunfachuun himatameera.
Daawwannaa Pirezidaanti Maakroon fi haaromsa Laalibalaa
Pirezidaantiin Firaansi Imaanu'eel Maakroon iddoo seena qabeessaa fi bakka amantaa Laallibalaa daawwatan.
Afriikaa Kibbaa: warri awwaalcha raawwachiisan paastarii 'du'aan kaase' jedhe himachuuf
Afriikaa Kibbaatti warri awwaalcha raawwachisu paastarii du'aan kaase jedhe himachuuf jiru
UKtti Waldaaleen Kiristaanaa kanaan booda tajaajilawwan Dilbataa hin qabaatan
Waldaan Kiristaanaa Ingilaand seera tajaajilawwan waldaa Kiristaanaa akka dirqamaan Dilbata irra akka ta'u murtaa'ee waggoota 400 hojii iirra ture jijjiiruuf sagalee kennan.
Paasterii biyya Zimbaabuwee malee Shepherd Bushurii fi haati warraa isaas himatamaniiru
Kibba Gondar magaalaa Makaane Iyyesuusitti waldhabdee hordoftoota amanataa Islaamaa fi Kiristaanaa gidduutti uumameen Masgiidni gubateera.